साउदीमा ६० जना नेपालीहरु भोक–भोकै - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /समाचार/साउदीमा ६० जना नेपालीहरु भोक–भोकै
साउदीमा ६० जना नेपालीहरु भोक–भोकै
काठमाडौं । साउदी अरेबियामा ६० जना नेपाली अलपत्र परेका छन् | नाकुरी नेपाल रिक्युरमेन्ट सर्भिसबाट साउदी पुगेका उनीहरु भनेको जस्तो काम नपाएर भोक–भोकै बस्न बाध्य बनेका छन् । आफूहरुको उद्धार गरिदिन भन्दै उनीहरुलाई हामीलाई भिडियो पठाएका छन् ! कम्पनीले एउटा सानो कोठामा खाँदेर राखेको उनीहरुको भनाइ छ । अझ ३ दिनसम्म खानका लागि केही नदिएपछि उनीहरु आफैले भान्छाको ताल्चा फुटाएर त्यहाँ भएका खानेकुरा खाएका छन् ।
तर, त्यो खाना पनि सकिएपछि अहिले उनीहरु मागेर खान बाध्य भएका छन् ! रोटी नुनसँग चोपेर खान बाध्य बनेका छन् उनीहरु । ग्रुपमा रहेका कोही विरामी भइहालेमा उपचार गर्ने पैसासमेत छैन उनीहरुसँग । पटक–पटक साउदीमा रहेका नेपाली दुतावासलाई आफूहरुको नाजुक अवस्थाबारे जानकारी गराए पनि दुतावासले केही नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
Onther News:: एउटै वडामा १३८ बालबालिका कुपोषित
दाङ / दाङको एउटै वडामा १३८ जना बालबालिका कुपोषित भएको भेटिएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ का १३८ बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको हो । तीमध्ये ४७ जना बालबालिका मात्र सम्पर्कमा आएको र अन्य बालबालिकाहरु सम्पर्कमा नआएको स्वास्थ्य चौकी टरिगाउँका फोकल पर्सन रेणु केसीले जानकारी दिनुभयो । “हाम्रो वडा नं ११ मा १३८ जना बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर ४७ जना मात्रै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, अन्य बालबालिकाहरु कता हुनुहुन्छ, हामी कहाँ सम्पर्कमा आउनुभएको छैन ।”
यी हुन् देशकै बेइज्जत गर्ने ‘नालायक’ परराष्ट्र सचिव’ !
राजधानी बासीको लागि दुखद् खबर : अब भाडामा बस्नेले पनि तिर्नुपर्ने भो कर !!